Kooxdii Jwxo-shiil, oo u Kala Jabtay Labo Garab oo Jubbaland ah – Rasaasa News
Kooxdii Jwxo-shiil, oo u Kala Jabtay Labo Garab oo Jubbaland ah
Mar 30, 2011 2011 [ras] - Jahawareerkii Kooxda Jwxo-shiil, balse ay ku heshiin wayday., ka dib kolkii ay kooxdaasi damacday in ay saldhig ka samaysato gablada Jubooyinka ee dalka Somaliya, Kooxdii Jwxo-shiil, Mar 30, Nairobia, oo ku basbeelay koonfurta Somaliya, oo u Kala Jabtay Labo Garab oo Jubbaland ah
Nairobia, Mar 30, 2011 [ras] – Jahawareerkii Kooxda Jwxo-shiil, oo ku basbeelay koonfurta Somaliya, ka dib kolkii ay kooxdaasi damacday in ay saldhig ka samaysato gablada Jubooyinka ee dalka Somaliya, balse ay ku heshiin wayday.
Todobaad ka hore xubno ka mid ah kooxda Jwxo-shiil, waxay magaalada London kaga dhawaaqday in ay samaysay maamul gabaleedka Jubbaland.
Maamul gabaleedkaas oo madaxwene loogu doortay Maxamed Cabdi-nuur [Kilaas], oo ah gudoomiyaha Jaaliyada kooxda Jwxo-shiil iyo xubno kale oo ka mid ah maamulka Jubbaland, oo ay magaalo madax u tahay magaalada Kismayo.
Waxaa kale oo jirta qayb ka tirsan kooxda Jwxo-shiil, oo iyagu doonayey in ay dawlada dhismaheedu ka dhaco Kenya, madaxna looga dhigo Gaandhi oo isagu ka mid ah xubnaha kooxda Jwxo-shiil, sida dadban ula shaqeeya.
Dhawaan waxaa ka tagay dalalka Yurub qaar ka mid ah taageerayaasha kooxda Jwxo-shiil, kuwaas oo laga bixiyey Tigidho, si ay uga qayb galaan shir ay kooxdu ku qabanayso Kenya, maamula loogu samaynayo Jubooyinka.
Shirkaas oo la filayo in dawlad gabaleed kale ay qayb ka mid ah kooxda Jwxo-shiil, ku magacaabi doonto madaxweyne Gandhi, ku xigeena Maadeey.
Sida ay wararku sheegayaan kooxda ayaa shirka lacag badan ku bixisay, oo ay la hoos gashay masuuliyiin ka tirsan dawlada Kenya. Dadka ka soo qayb galaya ayaa loo balan qaaday in la siin lacag, arintaas oo aad moodo in ay socon wayday, shirkana u keentay khilaaf aan la filayn.
Shirka ayaa la sheegayaa in uu khilaaf ka dhashay, oo ilaa iyo hada uu ku guulaystay oo kaliya in uu magac iyo magaalo uu sida uu sheegay ku shaqayn doono magcaabay.
Kooxda Jwxo-shiil, oo la ogyahay dhibaatada ay u gaysatay halgankii Jwxo iyo meesha ay gaadhsiisay dadweynaha Somalida Ogadeeniya, la yaab ma leh in ay ku basbeesho koonfurta Somaliya.
Kenya oo Ethiopia ku Furtay ALabaab Cusub oo Nabadiid